Imigca yokujikeleza kunye ne-AutoCAD-Ukusuka kwidatha yesitishi esipheleleyo-iGeofumed
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Iikholeji zeNgcaciso ze-AutoCAD - Ukusuka kwi-Data Station
AutoCAD-AutoDeskOkufumanekaGPS / IzixhoboTopography
Indlela yokuvelisa imizila yendlela esele senze ngayo nezinye iinkqubo. Kule meko, ndifuna ukuyenza ngenkqubo endiboniswe yenye yeengcali zam kwiseshoni yoqeqesho; awayeyazi kodwa awayengenamdla ungako kuyo kutshanje. Ndizokushwankathela inxenye yokuqala kuba okwethutyana elidlulileyo ndicacisile indlela idatha esuka kwisitishi esipheleleyo, kwaye aguqulwa abe yifomathi ye-dxf. Kule meko, ndifuna ukwenza okwahlukileyo, ndiludlulise uluhlu lwamanqaku kwifomathi ye-txt kwaye ndiyingenise kwi-CivilCAD, ke ndiza kuyichaza ngendlela elula ukuze umthambo usebenze ngokupheleleyo kwabo bafuna ukukhuphela idatha kwisikhululo ukuya kwimodeli yedijithali; ukulandela umbuzo womfundi waseColombia oza kundishiya ndilinde isithuba esilandelayo seprofayili.
1. Guqula ifomathi ye .sdr ibe luluhlu lwamanqaku .txt
Ndiya kusebenzisa oko sikubonise kuyo Inkcazo ye-Topography kutshanje, ukuze kungabikho ulwazi intloko ababethanda kuphela ukuhamba okanye ukuba entelarañe okubi ngaphezu kwabo babekho ngomdla omkhulu nenichubeke ukulibala ukhetha ukuba ukwabelana nabanye.
Kweli nqaku sichazile, kwaye ngoku andizukuphinda, ukumisela ukuthunyelwa kwedatha kwisikhululo esipheleleyo. Kule meko, ndiza kugxila kwinto eyenziweyo ukusuka kwiProlink.
Sivula iprojekthi entsha, usebenzisa Ifayile> Iprojekthi eNtsha . Emva koko sikhetha Ifayile> Ngenisa ukuzisa ifayile ye .sdr eyenziwe kwisikhululo esipheleleyo.
Emva kokuba le nqubo yenziwe, ngoko siyakuthumela kwifomati ye-txt.
Ukusuka kwimenyu efanayo, sikhetha Ifayile> Thumela ngaphandle, kwaye kwifestile sakhetha ukhetho Amalungiselelo aNcitshiswayo, ukuqwalasela ifomathi I-PENZ iyancitshiswe idibeneyo (* .txt). Ke, into esiza kuyithumela ngaphandle iya kuba yidatha eyahlulwe ngeekoma ngokulandelelana kwePoint, Coordinate X (Easting), Coordinate Y (Northing) kunye nokuphakama (Coordinate Z).
Ifayile igcinwa kwidilesi yeprojekthi yethu inzala.
2. Malunga ne-CivilCAD
Kwabaninzi, le nkqubo isenokungaziwa, nangona ibikho kudala; Inguqulelo 6.5 sele ibalekile kwi-AutoCAD 14 (ngo-1994 !!!) wenze okuninzi ngeefestile ezidadayo, xa iSoftDesk 8 ikwenzile ngendlela engathandekiyo kwimiyalelo yokubhaliweyo, kwaye ndikhankanya iSoftDesk kuba yayiyeyona ingaphambi kwezicelo ezibini ngoku ine-AutoDesk (Umhlaba kunye ne-3D yoLuntu).
Inzuzo yokuba i-CivilCAD inokuthi ifikeleleke kwixabiso elifikelelekayo, lenza oko kuthatha kumgxininkulu wethu waseSpeyin, njengoko kunjalo Eagle Point yemeko ye-Anglo-Saxon; Ukuba songeza ukuba inokwenziwa kwi-Bricscad, sigqiba kwelokuba umba wezoqoqosho yenye yezona zinto zinokwenzeka. Ayenzeki into efanayo xa uyenza kwi-AutoCAD kuba inenguqulo epheleleyo, kuba i-AutoCAD LT ayixhasi uphuhliso kwi ixesha lokuqalisa, ewe, isekela kwi-AutoCAD 2012 ukuya kwiinguqulelo ezininzi.
I-CivilCAD iyisicelo esakhiwe yinkampani yaseMexico ArqCOM, besenza ngendlela ebonakalayo kwingingqi yezoBunjineli kunye neendlela zobume bendawo ezinje ngokuhamba kweqashiso, iimodeli zedijithali, iiprofayili, uyilo lwejiyometri lweendlela kunye neenethiwekhi zamanzi ezicocekileyo. Yenza into esiza kuyidinga ukuyenza ne-Civil3D kodwa ngendlela ebonakalayo (ayenzi yonke into, kodwa iyayenza le nto siyifunayo), yenza nezinye izinto ezongezelelekileyo ezingenakho ukuyenza ngendlela elula, njengokuveliswa kwegridi zombini kwi-UTM nakwindawo ezinxulumene nokuma, ukushicilela ubeko olusekwe kwi-wizzard, ukubalwa kwe-batch auto kunye neengxelo ezahlukeneyo ezivela kwimeko yethu yokuthetha iSpanish.
Kanye efakwe CivilCAD, sidalwe kwi desktop okanye inkqubo emfutshane kwimenyu evuleka AutoCAD kunye menu olongezelelweyo ekuthiwa CivilCAD, apho unako ukufikelela yonke imisebenzi eyenziwe; nangona elowo unomyalelo wombhalo kulabo abathanda ukuya kuwo EBelgium kwiBelgium. Umzobo olandelayo ubonakalisa ukuba imenyu ye-CivilCAD kufuneka ijongeke njani, nangona kwiscreen esiphakamileyo ikwangumgca ofanayo othe tyaba.
3 Ngenisa idatha ye-txt evela kwi-CivilCAD
Ukwenza iirebe zamanqanaba, okokuqala, kufuneka udale ifayile entsha kwaye uyilondoloze; ezenziwa kunye Ifayile> Gcina.
Ukungenisa iimpawu esizivelise kwisinyathelo esedlule, senza nazo CivilCAD> Amanqaku> Indawo> Ngenisa.
Jonga ukuba zingaphi iindlela zokungenisa elizweni i-CivilCAD. Eziliqela zezi ziqhelo zenziwe ngendlela iiHispanics ezenza ngayo ngesixhobo esiqhelekileyo, ngokungafaniyo neenkqubo ezenzelwe abantu baseMelika abazi kuphela indlela yokuthetha COGO kunye nomqokeleli.
Sakhetha ukhetho n XYZ, kwaye sikuphawula ukuba ufake inombolo yenqaku kunye nenkcazo njengesichaso sakho.
Qaphela, ngaphambi kokwenza oku, kulula ukuba ujonge ifayile ye-txt, ukuqinisekisa ukuba inolu lwakhiwo. Kwaye kunjalo, ngoku kuhlala kuphela ukwenza i-Zoom Extent, ukubona apho amanqaku awa khona okanye useto lobungakanani bokubhaliweyo.
Ukuvelisa imodeli yedijithali
Oku kwenziwa kunye CivilCAD> I-Altimetry> Unxantathu> Indawo. Kuya kufuneka ubone iinketho ezibonakala ngezantsi, kumgca wokuyalela wesitayile se-archaic ye-AutoCAD:
Amanqaku / imigca yokujikeleza :
Oko kuthetha ukuba, sinokuyenza kwimigca esele ikhona okanye amanqaku. Ukuba i-C ikhethwe phakathi kweebakaki, kuya kufuneka ubeke u-P, emva koko ungene; ukuba i-P sele ikhethiwe njengoko kubonisiwe kumzekelo wam ke ngena nje.
Emva koko usibuza ukuba yeyiphi na amanqaku, sibakhetha konke kwaye siya kungena.
Emva koko usibuza umgama omkhulu phakathi kwamanqaku; oko kukuthi, akuyi kuvelisa i-triangulation phakathi kwamaphuzu ekupheleni kwendlela elandelwayo.
Umgama omkhulu <1000.000>:
Ngokuzenzekelayo kuza i-1000, kodwa loo nto iya kuxhomekeka kwimeko yethu yokuphakamisa; singayamkela ngokungena okanye ngokubeka enye. Ukuba luvavanyo ecaleni kwendlela, akufuneki lube ngaphezulu kokuphindwe kabini umgama esiwusebenzisayo ukutshintsha umbono wethu.
Ubuncinci i-Angle <1>:
Olu lolunye ukhetho, oluluncedo lokwenza lula ucoceko. Ngokubanzi asiyithatheli ngqalelo kodwa kufanele ukuba ukuba kumalunga nophando loyilo lokunkcenkceshela, apho kuthathwa khona amanqaku axineneyo.
4. Yenza imigca yentsontelo
Ngenxa yoko, sikhetha CivilCAD> I-Altimetry> Imigca yokujikeleza> Indawo. Kwiphaneli ebonakalayo silungiselela nganye imitha embalwa sifuna iipaliti ezisemgangathweni kunye nezisekondari; jonga indlela umdla umdla onokuthi umdla waba-ArqCOM ababenayo ngayo, xa abantu bacebisa ukuba babizwa ngokuba yiSlim Curves kunye neCrave Curves.
Apha uchaza igama lomaleko, umbala, kunye nekhonkco egudileyo. Khumbula ukuba umgca womgca awukho umgca ohlakaniphile, kodwa umgca kunye ne-radii ye-curvature, ngoko sinokuchaza iiparitha ezifana nalezi zingezantsi: Inani lezahlulo okanye ubuncinci ubude begophe, elisebenzayo kwinkqubo ukuvelisa imigca ejikelezayo ebonakala ngathi ziipoligoni okanye iinwele ezivela kwintombazana yaseCuraçao- hayi ngqo entloko 🙂 -
Xa ukhetha Ok, ukhetho lokukhetha imodeli ye-triangulated livela kumgca wolawulo.
Ukubhenela abo sibakhethayo: CivilCAD> I-Altimetry> Imigca yokujikeleza> Chaza. Silungisa okanye samkela ngokusilelayo oko kuza, ngokumalunga nesilinganisi esiza kuyisebenzisa ukuprinta, ukuphakama kwesicatshulwa, iiyunithi, izicwangciso kunye nokuba sifuna kuphela yokurekhoda kwinqanaba eliphezulu.
Phrinta isikali 1 ukuya <1000.00>:
Ukuphakama kokubhaliweyo kwi-mm <2.5mm>:
Imitha / iinyawo :
Inani leeDesimali <0>:
Ukurekhoda imigca engqinileyo? S / N:
Emva koko sicofa kwiingongoma ezibini ezigqithiseleyo ezidibanisa iikharve zezinga apho sinomdla kwi-labeling.
Kucacile ukuba i-Civil 3D iguqukele kwinqanaba elincomekayo ngokwenza oku, ngakumbi kuba ixhaphaza ukushumeka kwee-xml node kwiphaneli yasekhohlo, apho izinto ezahlukeneyo zemodeli zinokuba neetemplate, kananjalo kuba imodeli ikhona ngaphakathi kwesikhongozeli, kunye iingongoma zayo kunye nemigca yokuhamba okanye iimephu zethambeka yimiboniso ebonakalayo yento egciniweyo.
Ngokungafaniyo ne-CivilCAD eyenzayo, ethi ivelise izinto ezilahlekileyo kolu tshintsho. Kodwa abo basebenzise iSoftdesk baya kwazi ukuba ukuya kweli nyathelo kuthathe intuition, ukholo kwinto engabonakaliyo, kunye nentlahla. Kukho uncedo olukhulu lokusebenzisa i-CivilCAD, amanyathelo ambalwa, nangona ndizandisile kwiprozi yam ngenxa yokuphinda ndibekho kwaye ndinomngcipheko wokwenza iinwele ezingwevu ezintsha kumguquleli oswiti ovela ePeru oyirholileyo le nto egeomate.com
Nazi ezinye zeenzuzo ezifumaneka kwi-intanethi namhlanje.
Sawubona, NdinguRodrigo Hernández L. waseChile
kwaye ndiyayixabisa into endiyenzayo, mna ndifundiswa ngokuzibonakalisa kwipropathi ngaphezu kwe-20 eyadlulayo.
Kwaye kunzima kumntu onokwenza izifundo ekufundiseni i-neophyte ukuze afunde ngokwenene.
jose luis flores uthi:
Ndidinga ukuphakama ukusuka kwindawo yendalo ukuya kwinto ephezulu, ndingayenza njani ... sele ndinobume bendawo
UFrancisco Javier Suárez Pérez uthi:
Kulungile I wemihlaba iminyaka emininzi, ukuphatha theodolite malunga 22 kwiminyaka eyadlulayo, kodwa kwisikhululo lilonke babe namava kangako kunye imigca nentaba le nkqubo ukuze uphakamise aya kwisikhululo iyonke
Jorge González uthi:
Sawubona! noWade Alice:
“Bandinike isicwangciso esinezilinganisi zokulinganisa ezishicilelwe ephepheni.
1) Thatha umfanekiso wendiza
2) Guqula umfanekiso ukuya kwiJPG
3) Nge-AutoCad Raster Design, yifake
I-4) Ukuchonga ukugqithisa kwinqanaba lomgangatho ngamnye oyintloko (umgca odibeneyo) kunye nokuphakama kwawo. Inkqubo iya kucela. Kwakhona, gcina inani lamanqanaba omgangatho wesibini (amacandelwana amancinci) phakathi kweekhondom zezinga eliphambili kuba inkqubo iya kukubuza ukuba bunjani kumfanekiso.
Gcina ifayile uze uyivule nge-AutoCad.
Yiyo yonke into endikhumbulayo ukwenza iminyaka embalwa edlulileyo
Ewe, jonga eli nqaku.
Bandinika imephu enezinga le-cuvas eliprintiweyo kwiphepha. Ndifuna ukuyidlulisela kwi-autocad ukuze ndisebenze kuyo. Ngaba kunokwenzeka ukwenza oku?
Ngaba unganditsho njani?
ELIZABETH ESCOBAR uthi:
UKUBA NGOKUBA KUBA KUBALULEKILEYO KUNYE UMNTU UXHELEKILE UKUFUNDISA, KUBA ABANTU ABANTU BABASEBENZA KANYE KUNYE NABANYE UKUBA BENZISELE KWEBAZO BAKHO.
i-raul aponte uthi:
emva kwemini, cela i-cad cad 2008, ifake kwi-autocad ye-civic 3d 2011 ,,,,,,,, niyabonga
JORGE MARTELL uthi:
UMSEBENZI OSEBENZILEYO, UKUTHANDA IINKCUKACHA
Ukugqwesa, ngoku ndisebenzisa i-Civilcad kumsebenzi wophando lwezobugcisa kwaye ndinokuqinisekisa ukuba kuyisisityebi esibaluleke kakhulu esenza ukuba umsebenzi weofisi ufumane ixesha kwaye kulula ukuyisebenzisa.